Jonga kwi Isitshayina Inkcubeko kunye Dating Lovelorn
Isitshayina dating nje njengoko confusing, kwaye emangalisayo, njengoko naliphi na uhlobo dating. Kuba Westerners, ukukuthakazelela ukufunda malunga Isitshayina inkcubeko unako ukwenza i-interracial okanye ngamazwe budlelwane stronger. Kuba Isitshayina abantu abo bafuna ukuya kuhlangana abanye ukusuka efanayo zilandelayo: isiqalo, kwi-Intanethi dating zephondo unako ukunceda. Njengokuba nayo nayiphi na inkcubeko, asinguye wonke ubani kwi-China izahlulo efanayo beliefs. Nangona kunjalo, kukho ezinye attitudes malunga dating ukuba ingaba ngokufanayo phakathi Isitshayina.
E-United States, sibe kusetyenziswa i-unye ukuba senza zethu kunye nemigaqo yokusebenzisa imichiza malunga ngaye siye umhla kwaye lowo thina tshata. Kodwa esiqhelekileyo Isitshayina iintsapho, abazali babe silindele kuba kuthi. Imiba ukuba rhoqo zivela ziquka: nisolko babotshelelwe ukuba bangene trouble ukuba alenze ukuba bonke Isitshayina, dating ngu efanayo. Uzaku kuhlangana abantu abathi bazalwe e-United States baza kuba zange wahlala China, kodwa othe ngxi landela esiqhelekileyo Isitshayina inkcubeko. Uzaku kanjalo ukufumana abantu abo bafudukela apha njengoko abadala kodwa ingaba ngokupheleleyo ethambileyo kunye Plt-isimbo dating.
Kwaye kunjalo, uzakufumana yonke into kwi phakathi ngokunjalo
Yintoni oko kuthethwa kukuba kukho hayi nyani into enjalo njengoko ‘Isitshayina dating. ‘Njengawuphi na dating kwiimeko, ngu malunga yokufuna ukwazi elinye umntu, babo ingqikelelo kwi-bomi, kwaye zabo personal umdla, hopes kwaye amaphupha. Ukuba ukhe ubene anomdla intlanganiso abantu Isitshayina isiqalo, unezinto ezininzi iinketho. Abantu abaya kuphila kulo ethnically diverse izixeko ziza kuba abaninzi chances ukuba kuhlangana kwaye yathetha kunye abantu abakufutshane Isitshayina okanye Isitshayina-i-american. Ukuba uhlala kwi zoluntu apho kukho aren khange ezininzi Asian abahlali, kwi-Intanethi unako ukunceda. Kujike, dating web zephondo kunikela chances kuba Isitshayina dating. Kukho ezintathu engundoqo iintlobo Isitshayina dating zephondo: Ezininzi i-american abantu bamele ingakumbi attracted ukuba Asian abafazi. Kodwa abaninzi Isitshayina-i-american abafazi share efanayo izikhalazo malunga amadoda onomdla kuso dating kwabo. Baya. ukudinwa yokuba wamanzi acociweyo njenge ‘China dolls,’ okanye stereotype ukuze babe. ‘kweentlobo zezityalo,’ kwaye yokuba abanye abantu k ubonakala ngathi ngakumbi anomdla zabo ikhangeleka kunokuba iingqondo zabo. Kukho kanjalo ngokufanayo notion ukuba Isitshayina abafazi ingaba abathobekileyo okanye subservient. Abaninzi Isitshayina-i-american abafazi ingaba offended ngalo unye. Ukuba ngu-hayi kuthi ukuba umntu ujonge kuba i-kweentlobo zezityalo kodwa abathobekileyo helpmate akukwazeki ukufumana uthando kunye Isitshayina umfazi, nje ukuba kulula ukuba ukhathaza ukuba vumelani stereotypes isikhokelo yakho dating nzame
Isitshayina Abafazi Dating Zephondo Reviews Dating Isitshayina Abafazi →